Sheekh Cabdalla Xaarith iyo Xertiisii | Doodwadaag waa Danwadaag.
Sheekh Cabdalle Al-xaarith (AUN), ama Sh Cabdalle Xaarte-sida Reer-Hiiraanka ugu yeeri jireen- waxa uu kamid ahaa Jaaliyaddii Yamenta ee B/weyne, 80-dii qarnigii tagay. Waxuu ku jiray culimada magaalada ee u adeegta masjidka kana shaqaysa nashaadaadka kala duwan ee Masjidka sida xuska Nabiga scw, quraan-akhriska balaayo-xijaabka iyo waxii camal-kheyr ah. Masjidka aan ka hadlayo waa kan Jaaliyaddu dhistay gacantana ku ku haysay loona yaqaannay “Masjidka Carabta” illaa duufaankii taabsiga Masaajidda yimaado belowgii 90-dii.
Dadka badanaa waxay ku indho qaadeen taabsigii masaajidda dalka ay taabsanayeen kooxihii diinta ee laga soo diray Sacuudiga, balse wax weyn kama oga waxyaabahii ka horreeyay iyo dagaalkii lagu qaaday culimadii masaajidda joogtay iyo qaabkii hore aan diinta u haysannay.
Waxaa wali maskaxdayda ka sii shanqaraya eraydii tolmoonaa ee nabi-ammaanka ee sheekha iyo xertiisa ku celcelin jireen xilliga ay sii dhamaanayso xadrada:
مرحبا يانور العين
مرحبا جد الحسين
Quruxda waxay ahayd inay xalqadooda ay nabiga ku soo dhaweyn jireen marka ay sii dhamaanayso. Waxay ka dhigayaan inuu nabiga soo booqanayo ama la joogo!! Mala-awaal ka qiimo badan oo diini ah miyaad arkaysaa!!
Waxaa kale, oo aan xasuustaa Idanka Fooxa ee dhexyaalka ahaa iyo sida uu udayga ugu qaybin jiray dhinacyada Masjidka ee aad ugu baahnaa wax ka reeba shiirka ku gaamuray darbiyadiisa iyo darimihiisa.
Waxaan xasuustaa caruur loo diray xalqada dikriga ee ay oogi jireen Sh. Cabdalla Al-xaarith iyo xertiisa, inay soo bannadaan/qasaan, maadaama ay goobta ku haayaan-waa sida ay u dhigeene-khuraafaad iyo diin la’aan. Waxaa kale oo aan xasuustaa habeenno badan oo xalqadii barakada ku soo dagaysay ay ku dhex gaardinayaan afarta dhinacna laga galay si barakada soo dagayso looga qaso Sh. Cabdalle Xaarith iyo Xertiisa. Waxaan qiranayaa, inaan sidaa geesi u ahayn oo ku dhici waayay inaan caruurtaa dhax galo iska dhaaf goobta xadradee, balse; waxaa la ii tusay in waxa ay samaynayaan caruurtaa een ka haray inay lamid tahay sidii aniga oo ka haray dagaalkii Badar oo kale.
Maanta, waxaan mar kale arkaa, iyada oo dowlad iyo shicibba laga sii dhuumaalaysanayo fahankii soogalootiga ahaa oo loolaabanayo sidii hore iyo Sheekh Cabdalla Xaarith iyo xertiisii. Masaajidda ayaa caawa waxaa ka socdo dikri kii ugu qiimaha badnaa oo ay ku diirsadeen dhagaha Soomaalida.
Maxaa is beddelay? Ma diintii baa isbeddeshay ama dadka weeye had iyo jeer kuwa baal-wecellaynta lagu ibtileeyay?
Qoraa: Cabduraxiim C. Shaafici